Tantano mora foana ny hofan-trano lava kokoa amin'ny Extended Stays
Ny mpanofa trano fohy dia mety hahazo vola be, nefa miaraka amin'izay, raha tsy mahavita mitantana tsara ny risika ianao dia mety hiafara amin'ny famoahana tarehimarika marobe. Ireo mpandraharaha aparthotel lehibe manana leases raikitra na modely arbitrage manofa dia efa nampiasa ny paikady fampisarahana ny risika eo amin'ny hofan-trano fohy sy ny fijanonana maharitra. Manampy amin'ny ady amin'ny fatiantoka amin'ny volana malemy ao amin'ny tsena vanim-potoana.
Miaraka amin'ny vokatr'ilay valanaretina COVID-19, mitombo isa ny mpikarakara fandraisam-bahiny tsy maintsy mivezivezy ary manomboka maka famandrihana lava kokoa. Na dia maro aza ny lafiny amin'ny hofan-trano dia mitovy, ny sasany tsy mitovy ary ny ankamaroany PMSes ary fantsona mpitantana tsy mahafeno ny fepetra takian'ny fanofana maharitra.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou's maharitra maharitra manampy?
Raha Zeevou dia nanomboka ho PMS, Channel Manager ary Masinina famandrihana mpamatsy ho an'ireo orinasa lehibe manofa trano fialan-tsasatra lehibe sy mpamatsy trano misy serivisy, dia famandrihana alina fotsiny noohaninay. Na izany aza, vokatry ny areti-mandringana sy ny fangatahana nataon'ireo mpiaro ny sehatry ny orinasa marobe dia nanapa-kevitra izahay fa hiasa ihany koa amin'ny fandraofana ireo mpanofa trano antonony sy maharitra.
Ny endri-javatra Extension Stay an'i Zeevou dia ahafahan'ny mpampiantrano mamaritra ny taha isan-kerinandro sy isam-bolana, ary manome antoka fa ny faktiora isam-bolana ho an'ny fijanonana maharitra dia tsy miovaova isam-bolana. Ilay karazana singa iray ihany dia afaka manana drafitra tahan'ny maro mifandanja, ka ny tahan'ny hafa dia azo raisina amin'ny fijanonana isan'alina amin'ny fijanonana isam-bolana amin'ilay lisitra iray ihany. Io dia ahafahan'ny mpitantana trano fialan-tsasatra mampihena ny risika fananana poakaty amin'ny alàlan'ny fanambarana fotoana fohy, antonony ary fanofana maharitra, mifototra amin'ny toe-tsena miovaova hatrany.